Esory ny fifandraisana misy dika mitovy amin'ny Smart Merge Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ireo mpampiasa izay matetika mitahiry nomeraon-telefaona marobe sy adiresy ao amin'ny iPhone dia mirona amin'ny risika hamerina ilay fifandraisana mitovy amin'ny fotoana iray hafa. Nefa koa raha mampifandray ny fitaovantsika amin'ny kaonty Facebook-tsika na karazana rindranasa hafa misy fifandraisana isika, dia mety hijaly ihany koa noho io olana io. Ny fitantanana ny lisitry ny fifandraisana olana sarotra foana ny namahana azy io, satria raha vao nanao fanovana isika, indrindra raha amin'ny fomba be io, dia sarotra be raha tsy azo atao ny mamadika azy io, izay manery antsika hifandray amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso raha toa ka duplicated izy ireo, dia misy angon-drakitra mahasoa sy fivarotana tsotra fotsiny. ny anarana tsy misy fampahalalana.
Saingy afaka misafidy rindranasa amin'ny antoko fahatelo izahay izay manampy anay hitantana ny fandaharam-potoananay, mahita fifandraisana misy duplicate, anarana ao anaty fandaharam-potoana tsy misy angona ao anatiny ... Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa maro mamela antsika hanatanteraka ireo asa fiasa ireo izahay, fa kosa , miaraka amin'izay koa, ireo izay mendrika aloa. Ny fampiharana Smart Merge Pro dia iray amin'izany. Smart Merge Pro dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 3,99 euro fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Toy ny rindranasa rehetra mamela antsika hitantana famerenana na atiny poakaty amin'ny fifandraisantsika, Smart Merge Pro dia manolotra fividianana fampiharana an-tsokosoko mba hamonjy kopian'ny fandaharam-potoananay, zavatra iray izay mila izany amin'ny fotoana fohy isika, satria manana ny dika mitovy amin'ny iCloud foana isika, raha mbola ampanaovina isika.
Ny fampiharana, raha vantany vao nandinika ny fandaharam-potoananay manontolo izy, dia hanome vaovao ho anay andao hanambatra ny fifandraisana, indrindra ireo izay manao kopia, miorina amin'ny anarana sy ny angona izay samy mety misy. Hanolotra lisitr'ireo fifandraisana tsy misy fampahalalana ao anatiny ihany koa izy io. Tena mety ny mandinika ny valiny rehetra atolotray antsika alohan'ny hanatanterahana azy ireo, satria indraindray mety diso izy io ary mamafa na mampiaraka fifandraisana izay tsy tokony hataony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Esory ny fifandraisana misy dika mitovy amin'ny Smart Merge Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Apple Music dia manome marika mihoatra ny Spotify